I-Amp Citrate emfutshane (71776-70-0) nabaphakeli HPLC =98% | AASraw
/ iimveliso / Prohormone / Amp Citrate (71776-70-0)
SKU: 71776-70-0. Udidi: Prohormone
I-AASraw inokubaniswa kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwi-Amp Citrate (71776-70-0), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Njengoko kuchazwe ngasentla AMP citrate uyisondlo esondelene kakhulu ne-DMAA okanye i-1,3-dimethylamylamine. Ubudlelwane obusondeleyo phakathi kwezi zimbini ziyakuboniswa ngokugqithisileyo kukuba i-AMP citrate (methylpetanamine) kunye ne-DMAA (AKA methylhexanamine) yabelana ngesakhiwo esifanayo, kodwa i-DMAA iqulethe ikhamboni eyengeziwe kwi-skeleton yayo ...
Ividiyo ye-Amp Citrate
Amp Citrate Abalinganiswa abasisiseko
igama: Amp Citrate
I-molecular Formula: C6H15N • HCl
Isisindo somzimba: 137.7
Isitoreji sokugcina: -20 ° C
Umjikelezo we-Amp Citrate
Amagama eKhemikhali: Amp Citrate
I-Pouchong Tea Extract
I-4-Amino 2-Methylpentane Citrate
I-Amp Citrate Usetyenziso
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, i-AMP Citrate sele isisitha esithandwayo kwizinto zokuncedisa kwangaphambi kokusebenza kunye nokulungiselela amancinci. Ukusuka kwinqanaba lezesayensi, libizwa ngokuba yi-methylpentanamine, i-4-amino-2-methylpentane citrate okanye i-1,3-dimethylbutylamine (i-DMBA), kodwa ibizwa ngokuba yi "DMAA" entsha. Oku kubonakala kwizinto ezifanayo - zivinjelwe kwaye zivuselela, zombini ngokwemiqathango yamachiza kunye nempembelelo.
I-AMP Citrate yinto enamandla yokuvuselela inkqubo yesantya. Ayenzeki ngokwemvelo kumanqanaba amakhulu, kodwa angatholakala kwixabiso elincinci kwi-Tea Pouchong, kodwa kukholelwa ukuba ininzi yeCitrate ye-AMP isetyenziselwa ukuxhaswa.
Ngenxa yokufana kwayo kwi-DMAA ukusetyenziswa kwayo kunye neenzuzo ekuxhaseni ziye zafana kakhulu. I-AMP I-Citrate ithintela inkqubo ye-nervous efana ne-caffeine kodwa ingenamandla ngakumbi. Xa usebenzisa phambi koqeqesho uya kuphawula:
Ukunyuka kwamandla (ngakumbi xa kuhlanganiswe ne caffeine)
-Kukhula kwintsebenzo yezemidlalo
Ngokungafani namanqanaba aphezulu e-caffeine, i-AMP Citrate ngokuqhelekileyo idibaniswa nokukhululwa kwamandla okuqhubekayo kunye ne-crash encane.
I-AMP i-Supplement ye-Citrate iye yanandipha ukuhamba kakuhle njengenye yezinto ezithengiswa kakhulu kwivenkile.
Izithako ezongezelelweyo eziqukethe i-AMP Citrate:
Iibhanki zeBBM Enye ye2.0
I-BPM yeebhanki iLipoRush
Iibhanki zeBBM Ziqulunqa
-Kuvela kwiFrenzy Sports
Yiyiphi imilinganiselo ye-Amp Citrate
LE NKCUKACHA YONYELWA NGEMIBUZO EZIQHELEKILEYO KUNYE KUNYE
AWISEBENZISWA NJENGOBA UMSEBENZI WOKWENZA UKUFANELEKA OKANYE NAMANYE IMISEBENZI YEZEMPILO
Ngenxa yokungabikho kwezilingo ze-kliniki kwi-AMP, kunzima ukucacisa idilesi ephakanyisiweyo. Nangona kunjalo, kulindelwe ukuba umthamo uza kuba ngaphezulu kune-DMAA ukucacisa malunga ne-100 ukuya kwi-350 mg. Ixesha lesenzo esisebenzayo malunga neeyure ze-4-6.
Eyona ndlela iphumelele kakhulu ukwenzela ukwandisa amandla ngexesha lokufunda. Kungcono ukuthatha inxalenye malunga nemizuzu ye-30 ngaphambi koqeqesho. Ukuze ukwandise i-metabolism kunye nokulahlekelwa kwamathambo, kufuneka uwathathe ekuseni okanye ngaphambi kokutya.
I-AMP isebenze ngokusebenzisana ne-cafeine, kwaye ngenxa yoko unokufumana rhoqo izinto zombini kwi-pre-workout supplement. Kwimeko yokusebenzisa "i-solo" kufuneka ifakwe i-200-300 mg ye-caffeine ukwenzela ukuba kwandiswe inzuzo.
Qala ngeeritha ephantsi ukuvavanya ukunyamezela kwakho, kwaye ukwandisa i-dosing esuka apho.
I-Amp Citrate isebenza njani
IMP citrate imisebenzi, kwiingcamango, ngeendlela ezifana ne-DMAA, kodwa kungekhona ngokukhawuleza. Oku kwenza ukuba kube ne-neurological stimulant, njengoko isebenza ngokukhupha i-neurotransmitter enamandla i-norepinephrine, ngaphezu kwe-dopamine. Amanqanaba angandayo kule mi hormone emibili inokunyusa izinga lethu lokuqwalasela, ukugxila, amandla, ukukhuthazwa kunye nokuphaphazeka kwengqondo.
Ngaba i-AMP Citrate yomthetho?
Njengamhla, ewe. I-AMP Citrate ayiyona isithako esingekho mthethweni. Nangona kunjalo, kuhlolwe yi-FDA emva kokuba ezininzi izikhalazo malunga neziphumo zaso zingeniswe ngokusemthethweni. Ngaloo ndlela, ngelixa i-AMP Citrate isemthethweni yokusetyenziswa komntu, iinkampani ezininzi ziye zazisusa kwiithalali ukuqinisekisa ukuba abayi kuba yi-FDA ekujoliswe kuzo.
I-AMP Citrate isesekhoyo, kodwa i-FDA ibonakala ivala ngokukhawuleza. Itholakala phantsi kwamagama onke adweliswe ngasentla, kwaye mhlawumbi ngaphezulu, ngoko kufuneka kube yithuba ngaphambi kokuba zonke iinketho zakho zihambe. Kodwa qaphela ukuba iinkampani ezisebenzisa amagama aguqukayo ukufumana imithetho ye-FDA ayizona iinkampani ezithembekileyo zokujongana nazo.
I-Amp Marketing Citrate
Ngaba i-Amp Citrate inayo nayiphi na imiphumo emibi
Ngenxa yokufana kwayo ne-DMAA, iimiphumo ezichaphazelekayo ze-citrate ze-AMP zifana ngokufanayo. Amanqanaba aphezulu angabangela ukuxhamla, ukunyamekela kwentliziyo, kunye neempawu ezihambelanayo. Abasebenzisi be-citrate ye-AMP baye baxela ukuba kunokubangela ukuhlaselwa kwe-DMAA emva kokuba imiphumo igugile.
Ngenxa yokuba i-AMP citrate iyisithako esitsha, kuye kwaba nezifundo ezimbalwa kwiqumrhu malunga nokusebenza nokukhuseleko. Ngaloo ndlela, iyancoma bonke abasebenzisi be-citrate ye-AMP ukuba baqaphele, bangadli ngaphezu kwamanani okucetyiswayo, kwaye bangayisebenzisi ngokubambisana notywala, okanye iimveliso ezahlukileyo okanye ukutya eziququzelelayo. Ukuba unamayeza okanye unobungozi beemeko zonyango, ucetyiswa ukuba ungasebenzisi ukusebenzisa iimveliso eziqulethe esi sithako.
Indlela yokuthenga i-Amp Citrate kwi-AASraw
Amp Citrate Recipes
I-Dymethazine (DMZ) powder